Ngwa kacha mma redio maka gam akporo | Gam akporosis
Ngwa kacha mma redio maka gam akporo
Anyị na-alaghachi na posts nke anyị bu n'obi iji gosipụta ngwa kacha mma maka gam akporo gị, na nke a nke ọ bụ maka m ọ bụ ngwa kacha mma redio maka gam akporo nke oge.
A na-akpali akpali ngwa iji gee redio na ntanetị, nke ahụ bụ, site na Internetntanetị, nke, na mgbakwunye na inye anyị ohere ige ntị na ọdụ obodo na nke mba nke ọnọdụ anyị, na-enyekwa anyị ohere gee redio na ebe ọ bụla n'ụwa ekele maka nnukwu nchekwa data nwere ọtụtụ puku ọdụ redio sitere n'akụkụ ụwa niile, dị na akpa anyị ozugbo maka Smartphones anyị gam akporo. Kedu ihe ị chọrọ ịma ngwa ọ bụ? Ọ dị mma ị ga-pịa ebe ọ na-ekwu «Nọgidenụ na-agụ nke a post».
Ngwa m na-ekwu maka ya ma nwee nsọpụrụ dị ukwuu ịbụ ihe kacha mma redio maka gam akporo nke oge a, bụ ngwa anyị nwere ike ịchọta kpamkpam n'efu na Playlọ Ahịa Google Play n'okpuru aha Gbanwee. Ngwa m ga-ahapụrụ gị n'okpuru usoro ndị a, na igbe Google Play ka ị nwee ike ibudata ya ozugbo na ngwa ngwa ngwa ngwa maka gam akporo.
Ntanetị Redio - Gbanwee 📻🎶
Gbanwee site na a ezigbo enyi na enyi interface mgbe ị na-akpachara anya na nke ugbu a, na ọ bụrụ na enweghị ihe ọ bụla Ihe eji emepụta ebe ọ bụla, ọ na-enye anyị taabụ atọ dịnụ iji chịkwaa akụkụ niile nke ngwa ahụ.
Ozugbo anyị banyere ngwa ahụ, a na-egosi anyị taabụ nke ọdụ mpaghara na nke mba dabere na mpaghara ala anyị nọ na ya, n'okwu a ka gosipụtara anyị isi obodo na mba ụgbọ na Spain.
Naanị aka nri ka egosiri taabụ nke ọdụ ma ọ bụ ọdụ anyị na-ahọpụta dị ka ọkacha mmasị na aka ekpe taabụ ebe anyị nwere ike ịchọta ma chọọ n'etiti ọtụtụ puku ọdụ ụgbọ ala haziri.
Otu ihe dọọrọ uche m bụ na na mba dịka United States, mgbe ị na-ahọpụta mba ahụ, ngwa a nwere ike kụtuo ka e wee gosi anyị ọdụ ndị steeti haziri.
Ewezuga taabụ atọ a, na akụkụ aka nri elu, site na ịpị ntụpọ atọ kwụ ọtọ, anyị nwere ike ịnweta submenu nke ntọala ngwa ebe anyị nwere ike ịchọta otu Nchọgharị ọchụchọ kpọmkwem site na isiokwu, a na-akpọ nhọrọ Chọọ Chọọ nke ahụ na-enye anyị ohere ịrịọ ka agbakwunye ọdụ ọhụrụ site na izigara ha aha ọdụ ahụ, ebe nrụọrụ weebụ ya yana adreesị ozi-e anyị.
N'ikpeazụ cuñeta na nhọrọ iji soro onye ọ bụla anyị chọrọ site na netwọk mmekọrịta anyị kerịta ọdụ, WhatsApp, Telegram ma ọ bụ ọbụna email, yana nhọrọ practicalzọ ọpụpụ bara uru iji pụọ kpamkpam ngwa ahụ ma ghara ịnọ dị ka ọ na-eme na ngwa ndị ọzọ nke ụdị ahụ, na-agagharị na ndabere na-ewe ihe onwunwe site na ọdụ anyị na-enweghị anyị na-ahụghị.
Iji tinye ụfọdụ nsogbu na ngwa ahụ, ihe na n'aka nke ọzọ nwere nsogbu dị m ezigbo mkpa, bụ nke ahụ enweghị nhọrọ Oge Ihi ụra ma ọ bụ akpaaka-apụ, nhọrọ nke m na-agwa gị dị m mkpa ebe ọ bụ na m na-ehikarị ụra mgbe niile, na-ege ntị na redio na mmemme nke ngụ oge ka ọ gbanyụọ mgbe oge amachara na anaghị m ahụ ya n'ụzọ ahụ. na-enye nsogbu n'abalị dum.
Iwepu nsogbu a bụ na nye m eziokwu ahụ dị oke mkpa yana enwere m olile anya na ndị mmepe nke ngwa ahụ ga-agbakwunye na mmelite ndị ga - eme n'ọdịnihu, anyị enweghị obi abụọ tupu otu nke kacha mma redio ngwa maka gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma redio maka gam akporo
Are bụ ndị na-ezighi ezi ebe ọ bụ na redio kacha mkpa na United States na-efu efu fm z 100 kola fm ndị ọzọ okenye na ndị ọzọ obi umeala ngwa nwere ha, ma eleghị anya, ha ga-akwụ gị ụgwọ maka ịgha ụgha
Sergi ndị montes dijo
Daalụ! Ma ọ dịkarịa ala na ụdị ngwa ngwa dị ugbu a ọ nwere oge ụra. N'ihi ya, ọ kaara gị mma!
Zaghachi Sergi Montes
Ọ nweghị ihe nwere ike dochie ezigbo ama na FM nnata.
Ọnye na -bụ Juan Carlos Urrea Rios? dijo
Ọ bụ nnọọ eziokwu na igwe mgbasa ozi FM ka mma n'ihi data ahụ, ige egwu ụwa dị mma mana n'ihe gbasara ọtụtụ akụkọ na ozi redio ndị ọzọ, ndị obodo bụ ihe kacha amasị anyị.
Zaghachi Juan Carlos Urrea Rios
Ọ bụ ngwa nwere ọtụtụ ọdụ gburugburu ụwa ma nwekwaa oke imewe. Nwere ike ịtọ ngụ oge iji gbanyụọ onwe ya, o nwere ọtụtụ egwu egwu na akụkọ. Ana m ahapụrụ gị njikọ ahụ: